Free Fire New Pet: Stronger throws with beastly pal Beaston | Codashop Blog MM
နှစ်သစ်မှာ Free Fire က သန်မာတဲ့ Hulking အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသစ်ကို Beaston မှာ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ hefty cybernetic baboon ကတော့ သူ့ရဲ့ Special Skills တွေနဲ့ Support ပေးနိုင်ပြီး ကစားကမားတွေကို Battlefiled မှာ အားအင်မြှင့်ပေးပါတယ်။ ကဲ တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်လေးတွေက ဘာတွေကောင်းလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Beaston က ကြီးမားပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ အံ့အားသင့်နေသူတွေအတွက်ကို ပြောချင်တာကတော့ နားထောင်ကြပါ။ ဂိမ်းထဲက ဖော်ပြချက်မှာ ရေးသားထားတာကတော့ “သူ၏အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ သူမှာ နူးညံ့သောနှလုံးသားလေးရှိပါတယ်။” Beaston ရဲ့ Skill ကို Helping Hand လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ သူ့မှာ လက်ပစ်ဗုံးတွေ၊ Gloo Walls တွေ မီးခိုးဗုံးများကို ပစ်တဲ့ အကွာအဝေးကို ၁၀% တိုးမြှင့်နိုင်သည့် စွမ်းအားရှိပါတယ်။ Beaston Level တက်လာတာနဲ့ Skill က ၂၀% အထိတိုးလာပါတယ်။ အမြှင့်ဆုံး အဆင့်မှာတော့ ပစ်တဲ့အကွာအဝေး 30% အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Beaston က Action ၃ မျိုးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ တစ်ခုကတော့ “Celebration” လို့ခေါ်ပြီး ကစားသမားက ရန်သူကိုသတ်လိုက်ရင်တို့ Medkit စားနေရင်တို့မှာ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ “Play” ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ “Show” လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ခုလုံးက Command Wheel ကို သုံးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းထဲမှ အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ Beaston မှာ Great White Beaston လို့ခေါ်တဲ့ Skin ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ နာမည်အတိုင်းဘဲ Beastonက အနက်ရောင် နှင့် ရွှေရောင်များနှင့်အတူ အဖြူရောင်အမွေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Character တွေကို တစ်ဖွဲထဲထားရင်ကော? ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မြှင့်မားစေရန် Beaston ကို Alvaro ရဲ့ Art of Demolition Skill နဲ့ တွဲဖက်သင့်ပါတယ်။
Beaston ကို သင်ဘယ်လိုထင်သလဲ? Battle ကို ခေါ်ဖို့ အတွက် သင့်တော်တယ်ထင်လား? အခြား အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ အကြောင်းသိချင်လျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရင် ပိုစ့်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Free Fire အကောင့်ကို Codashop နဲ့သာ ငွေဖြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ကျွန်ပ်တို့သည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသော ငွေချေမှုစနစ်များစွာဖြင့် ငွေဖြည့်နိုင်ရန် အာမခံပါတယ်။
Previous articleFree Fire မှာ Ronaldo ရဲ့ Chrono အတွက် အကောင်းဆုံး Character Combo နဲ့ ထိပ်ဆုံးကို တက်လိုက်ရအောင်